Samsung Galaxy A5 2016 nyocha na echiche | Gam akporosis
Samsung Galaxy A5 2016 nyocha na echiche
Alfonso de Frutos | | Nyocha, Samsung
Afọ ole na ole gara aga, onye nrụpụta Korea gosipụtara akara ọhụrụ nke ngwaahịa Galaxy A. Ọhụrụ dị iche iche nke ngwaọrụ dị n'etiti, mgbe ogologo oge chere, gosipụtara ihe ụlọ ọrụ a nwere ike. Ana m ekwu maka ezinụlọ Galaxy A.
Ugbu a, ewetara m gị Samsung Galaxy A5 2016 nyochaa vidiyo, ọnụ ọgụgụ zuru oke zuru oke, yana njiri mara mma, arụmọrụ iji dabaa yana igwefoto dị mma nke dị ugbu a ị nwere ike ịzụta na Amazon maka ihe na-erughị euro 300.
1 Samsung Galaxy A5 na-ejigide DNA nke Samsung na usoro akara nke ụmụnne ya ndị okenye
2 Nka na ụzụ e ji mara Samsung Galaxy A5 2016
3 Lee AMOLED dị mma na ekwentị Samsung
4 Igwefoto nke na-arụ ọrụ ahụ
4.1 Osisi foto nke Samsung galaxy A5 2016
5 A batrị na-anapụta na-enweghị oké fanfare
6 Nkwubi okwu ikpeazụ
7 Uche ederede
8 Foto ihe osise nke Huawei Mate 9
Samsung Galaxy A5 na-ejigide DNA nke Samsung na usoro akara nke ụmụnne ya ndị okenye
Ruo ugbu a Samsung ahọrọla akara nke ngwaahịa, Galaxy Ace na Mini, nke pụtara maka iji polycarbonate maka imepụta ihe ngwọta ha. Mana n'ikpeazụ onye nrụpụta ahụ gere ndị ọrụ ahụ ntị wee kpebie iwepụ ezinụlọ abụọ ahụ ịchọta, n'etiti ndị ọzọ, akara ọhụrụ Galaxy A ya na usoro nke odi ike nke ejiri ihe ndi di ebube.
Ma ọ bụ na anyị na-arịọ Samsung maka ọtụtụ afọ ka ị lezie anya nke obere nsụgharị Mini nke mma agha mbụ ya. Wantsnye chọrọ Samsung Galaxy S5 Mini ma ọ bụrụ na mbipute a dị ala karịa? Luckily ha mechara ghọta anyị ma nye ndụ na usoro, na-enye ngwaahịa nwere oke mma.
Maka na mgbe m jiri Galaxy A5 2016 maka izu abụọ, enwere m ike ịgwa gị nke ahụ ekwentị na-eche ma mara ezigbo mma na aka ịbụ onye mmepụta oyiri nke Samsung Galaxy S6. Echefula na ndị Korea n'onwe ha kwetara na ha amụtala ọtụtụ ihe na nhazi na ekwentị mbụ ahụ nwere njiri mara mma. Ọ bụ ezie na anyị hụrụ ụfọdụ esemokwu, dị ka mkpochapu profaịlụ curved n'akụkụ, na-eme ka ekwentị ahụ kwụ ọtọ.
Ka m na-ekwu, ekwentị bụ ezi ala na aka na, n'agbanyeghị ya 5.2 sentimita asatọ, o nwere akụkụ nke na-enye ya ohere ijide ya n'enweghị nsogbu. Ihe ichere ma ọ bụrụ na anyị echebara obere akụkụ ya: 144.8 x 71 x 7.3 mm na ịdị arọ nke gram 155.
N'ihu bụ ebe anyị na-ahụ usoro ndị ahụ nke njirimara Samsung: a na-eji okpokolo agba agba nke ọma nke na-enye ohere ka ihuenyo ahụ nwee akụkụ buru ibu n'ihu na bọtịnụ anụ ahụ a maara nke ọma nke ogwe aka abụọ n'akụkụ ya. Ọ dịghị ihe dị ịrịba ama, mana ọ na-arụ ọrụ n'ezie.
N'akụkụ aka nri, na nke ahụ Ogwe aluminom nke n’eme ka onu ogugu di nma, bụ ebe anyị na-ahụ bọtịnụ ike nke ekwentị nwere ezigbo pịa yana ụzọ dị mma. Dị ka igodo akara olu na akụkụ aka ekpe nke ekwentị na, dị ka bọtịnụ ike na Galaxy A5 2016, ha bụ nke aluminom.
Na azụ anyị na-ahụ Samsung Galaxy S6 ọzọ. Ma ọ bụ na panel deere. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ iko ahụ dị mma nke dị ezigbo mma, ọ bụ ezie na adọọla gị aka na ntị na ọ na-adọta akara mkpịsị aka dị mma.
Igwefoto ahụ na-apụta ntakịrị mmetụta utịp, mana ọ pere mpe ma ọ naghị ewe iwe. Ugbua na akụkụ dị ala bụ ebe anyị na-ahụ obere ọkà okwu na mpaghara dị ala nke ọdụ ahụ nwere ụda mono dị mma, na mgbakwunye ịkpọ anyị ka anyị kpuchie ya na mberede ma ọ bụrụ na anyị na-egwu egwuregwu vidio. Ihe ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-eme na nke naanị ihe ngwọta ya bụ inye ndị ọkà okwu n'ihu, nke na-eme ka njedebe nke ọnụ ọgụgụ ahụ dịkwuo elu.
Obi abụọ adịghị ya, Samsung Galay A5 2016 a bụ nke kachasị mma kachasị dị n'etiti Samsung emebere ruo taa. Ekwentị mara mma nke nwere njirimara nka na ụzụ na-adọrọ mmasị, ọkachasị ihuenyo Super AMOLED.
Nka na ụzụ e ji mara Samsung Galaxy A5 2016
Nlereanya A5 2016 Galaxy A
Usoro njikwa Android 6 n'okpuru akwa oyi akwa
Ihuenyo 5'2 "Super AMOLED na mkpebi Full HD 1920 x 1080 ruru 424 dpi
Nhazi Samsung Exynos 7580 Octa-isi 53GHz Cortex-A1.6
Nchekwa n'ime 16 GB gbasaa site na MicroSD
Igwefoto na-aga n'ihu 13 MPX nwere oghere oghere 1.9 / autofocus / nyocha anya anya / nchọpụta ihu / panorama / HDR / LED flash / Geolocation / Ndekọ vidiyo na ogo 1080p
Igwefoto ihu 5 MPX nwere oghere hiwere isi 1.9 / vidiyo na 1080p
Njikọ DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; 3G band (HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1900/2100) 4G band band 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 4 (1700/2100) / 5 (850) / 7 (2600) / 8 (900) / 9 (1800) / 12 (700) / 17 (700) / 18 (800) / 19 (800) / 20 (800) / 26 (850) / 28 (700) / 29 (700) / 38 (2600) / 39 (1900) / 40 (2300) / 41 (2500) Ibu Chukwu
Atụmatụ ndị ọzọ akara mkpisiaka ihe mmetụta / accelerometer / dara imecha
Batrị 2.900 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Akụkụ 144.89 x 71 x 7.3 mm
Ibu ibu 155 grams
Ahịa 299 euro
Nyochawa ya Samsung Galaxy A5 2016 bụ ezigbo ekwentị na nke ahụ gara n'ihu ịgụnye ọhụụ ọhụrụ ahụ dị n'etiti etiti nwere ekwentị, na-enweghị iru mma agha nke mbụ, nwere atụmatụ ndị ga-enye ohere ịnye karịa ahụmịhe onye ọrụ.
Iji malite, Samsung Galaxy A5 2016 nwere ezigbo ihe nhazi ya. Ana m ekwu Samsung Exynos 7580, isi asatọ nke Cortex A53 SoC kụrụ na 1.6 GHz na 64-bit ije na, yana Mali T720 GPU na 2 GB nke RAM nchekwa Nọmba ekwentị mere ka ọnụ ọgụgụ a bụrụ otu egwuregwu zuru oke.
Dịka ị nwere ike ịhụ na nyocha vidiyo, Samsung Galaxy A5 2016 na-agagharị nke ọma site na taabụ dị iche iche, na-enye mmetụta dị mma nke ojiji. Akụkụ nke akwụmụgwọ na-aga na mkpuchi nke Samsung nke na-adịkwaghị arọ dị ka nsụgharị ndị gara aga.
Touchwiz abawanyeala nke ọma ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga, ugbu a, ọ bụ akwa oyi akwa na-adịghị ala ala
Ma ọ bụ nke kachasị ọhụrụ nke Touchwiz Ọ naghịzi abịa na narị abụọ junk ngwa ma ọ na-abịa nnọọ ọcha-ekwe ka anyị họrọ nke ngwa anyị chọrọ iji. Ya mere na nke a, ọ bụ ezie na m na-ekwu mgbe niile na Pure Android dị mma, m ga-ekwu na ahụmịhe onye ọrụ m adịghị egbochi nsogbu a.
Ọ na-nwere a di na nwunye nke-akpali nnọọ mmasị ọrụ dị ka ekwe omume nke rụọ ọrụ igwefoto site na ịpị Home button ugboro abụọ, bara oke uru maka ọnọdụ dị egwu ebe ịchọrọ ịse foto ozugbo enwere ike. Achọpụtala m ọrụ ahụ bara ezigbo uru iji nwee ike ịme ngwa abụọ n'otu oge.
Ihere mebe ya ihe mmetụta mkpisi aka nke, ọ bụ ezie na ọ karịrị ịrụzu ọrụ ya, bụ nzọụkwụ abụọ n'azụ ndị na-agụ akara mkpisi aka nke mejupụtara njedebe nke Huawei, onye isi ya. Onye na-agụ Galaxy A5 2016 dị ntakịrị nwayọ na oge ụfọdụ ọ na-esiri ike ịmata akara mkpisiaka, ọ bụ ezie na m kwuru, ọ na-arụ ọrụ ya nke ọma.
Laghachi na ngwaike, kwuo ya Enweela m ike ịgba ọsọ egwuregwu chọrọ nnukwu ikike eserese na Samsung Galaxy A5 2016 na-enweghị nsogbu ọ bụla. Enwere m obi ụtọ egwuregwu ndị a n'aghọtaghị nkwụsị ọ bụla ma ọ bụ lag, n'ihi ya, ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ijide n'aka na A5 2016 ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke egwuregwu na-enweghị nnukwu nsogbu. Agbanyeghị na iji oge ịkwụ ụgwọ dị elu ma e jiri ya tụnyere ekwentị ndị ọzọ, ihe na aka nke ọzọ ezighi ezi.
Ke ofụri ofụri, m ga-ekwu na Samsung Galaxy A5 2016 Ọ karịrị mmezu nke ozi ya, nke bụ ikwe ka onye ọrụ ọ bụla jiri ekwentị na-enweghị nchegbu na ngwa a ma ọ bụ egwuregwu ahụ agaghị arụ ọrụ. Ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a usoro mmiri nke usoro ahụ, anyị nwere oke njedebe dị oke elu.
Lee AMOLED dị mma na ekwentị Samsung
Samsung arụsi ọrụ ike nke mere na akụkụ Super AMOLED ya kachasị mma n'ahịa ma n'ihe gbasara A5 ọ bụ ihe ịga nke ọma. Ekwentị na-abanye n'anya ma mgbe ị hụrụ njedebe nke Galaxy A5 2016 na ihuenyo ya dị egwu, ị ga-ahụ n'anya.
Na ihuenyo nwere panel 5.2-inch Super AMOLED nke na-enweta mkpebi Full HD 1080p na pikselụ 424 kwa inch, anyị nwere tupu anyị otu nke kacha mma hụ na i meziri ị ga-ahụ na nke a nso nke igwe. Nkọpụta ọ na-enye dị oke egwu, naanị ị ga-agụ iji hụ ịdị mma.
Gụ ihe bụ ezigbo ọ joyụ, site na iwetulata nchapụta na opekata mpe ị nwere ike ịnụ ụtọ oge ị ga-agụ ihe n’echegbughị onwe gị maka anya gị na-agwụ ike. Na ikiri n'akuku bụ ihe fọrọ nke nta ka 180 degrees ma ọ nwere ezigbo agba na ọdịiche magburu onwe ya, ihe a ga-atụ anya na panel AMOLED.
N'ụbọchị anwụ na-acha, ọ na-enye ihe ọmụma zuru oke ka anyị wee nwee ike ịhụ ọdịnaya ọ bụla na-enweghị nsogbu, na mgbakwunye na iko ihu anaghị adị oke oke ka ọ ghara ịta ahụhụ gabiga ókè.
Igwefoto nke na-arụ ọrụ ahụ
La igwefoto ọ ga-abụ otu n'ime ngalaba kachasị mkpa na ekwentị. Leekwa Galaxy A5 2016 na-emezu n’ụzọ zuru oke site n’inye ezigbo igwefoto n’etiti. Enweghị ihe ọ bụla dị egwu, mana zuru oke maka ọnọdụ ka ukwuu.
Ma ọ bụ ya n'ọnọdụ ndị nwere ezigbo ọkụ, Galaxy A5 2016 na-ewe ezigbo foto, nwere agba chara acha. N'ọnọdụ ndị nwere obere ọkụ, ma ọ bụ mgbe ị na-elekwasị anya na ụlọ dịka ọmụmaatụ, eziokwu bụ na ogo dabara nke ọma, na-amanye anyị ime ka ọnọdụ HDR rụọ ọrụ iji nwee ike ijide foto dị elu, na-edozi ọnọdụ ahụ ọtụtụ dị ka ị ga-ahụ na ihe atụ na m ga-ahapụ gị n'okpuru.
N'ime ụlọ nwere ọkụ sitere na igwefoto na-akpa àgwà ọma na foto abalị, n'agbanyeghị ọdịdị nke mkpọtụ a na-atụ ụjọ, dị mma karịa ka m tụrụ anya ya. Mara kwa na nke a Samsung Galaxy A5 2016 nwere otu igwefoto software dị ka Samsung Galaxy S6 nke sụgharịrị gaa n'ọtụtụ ọrụ dịgasị iche iche na nzacha nke ga-atọ ndị hụrụ foto ụtọ, mepee ọtụtụ ohere dị iche iche iji mee nnabata zuru oke.
Enwere m mmasị karịsịa na Samsung gụnyere a ọrụ mode nke ahụ ga - enyere gị aka idozi ụkpụrụ dị iche iche nke igwefoto dị ka nguzo ọcha, ISO ma ọ bụ ikpughe. Ngwá ọrụ dị mkpa maka ndị ọkachamara n'ọhịa, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ihe gị abụghị foto, jide n'aka na site na ihe niile dị na akpaka, ekwentị na-akpa àgwà ọma.
N'ikpeazụ, ịsị na igwefoto dị n'ihu, yana mkpebi 5 megapixel ya, na-enyekwa ezigbo njide na nke ahụ ga-eme ka ị pụọ karịa otu nsogbu.
Osisi foto nke Samsung galaxy A5 2016
A batrị na-anapụta na-enweghị oké fanfare
Batrị gị nke 2.900 mAh Ọ dị m ka ọ dị mma na m na-echegbu onwe m na ekwentị agaghị eru na njedebe nke ụbọchị. Mgbe m jiri Galaxy A5 2016 ruo izu abụọ enwegoro m ike ịchọpụta na nnwere onwe ya dị otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị na ọkara nke ojiji, dabere na okpete anyị nyere ekwentị.
Na ụbọchị nkịtị, yana otu elekere nke Spotify, sọọfụ ịntanetị na iji ọrụ izi ozi ngwa ngwa, netwọkụ mmekọrịta na ịgụ ozi ịntanetị, enwere m ike ịbịa n'abalị na batrị 35%. N'ezie, mgbe m malitere iji ngwa na-achọ ngwa ma ọ bụ egwuregwu vidio, batrị na-efegharị.
Luckily Galaxy A5 2016 nwere usoro ngwa ngwa na-agba ọkụ nke mere ka m kwụnye ekwentị n’ọrụ n’ihe dịka otu elekere na nkeji iri na ise.
Nkwubi okwu ikpeazụ
Samsung emeela a nnukwu ọrụ na Samsung Galaxy A5 2016 a. Ekwentị zuru oke nke na-egosi na onye nrụpụta Korea amatala ihe ọ mụtara wee mechaa gee ọtụtụ narị puku ndị ọrụ chọrọ ka ndị na-etiti etiti nke ihe ndị dị mma.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-alaghachi azụ site na ịzụta ekwentị nke ụdị ndị dịka Huawei ma ọ bụ Motorola mere ma họrọ ịdabere na ụdị ndị ama ama ama ama na ahịa dị ka Samsung.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị nwere adịchaghị emecha, ihe na-erughị 300 euro na nke na-egbo mkpa nke ụbọchị, m na-ekwe nkwa na Samsung Galaxy A5 2016 a agaghị emechu gị ihu.
3.5 akara kpakpando
Ọ dị ezigbo mma
Samsung A5 2016 AXNUMX
Nyochaa: Alfonso de Frutos
Ọnụ na-adọrọ adọrọ nke nwere aluminom na iko iko
Igwe Super AMOLED ya bụ ihe na-atọ ụtọ
O nwere FM Radio
Mkpisiaka mkpịsị aka gị dị ntakịrị nwayọ
Ọdịdị nke ọkà okwu dị mma
Foto ihe osise nke Huawei Mate 9
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy A5 2016 nyocha na echiche
A ọhụrụ Meizu ama leaks na curved n'akụkụ
Surfy Browser, ihe nchọgharị weebụ ọhụrụ ị nwere ịma